फ्राईडे रिलिज अन्तर्गत ‘लम्फू’, ‘हिरोज’ र ‘मनाङ्गे नानी’ हल छिरे, कसले मार्ला बाजी ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentफ्राईडे रिलिज अन्तर्गत ‘लम्फू’, ‘हिरोज’ र ‘मनाङ्गे नानी’ हल छिरे, कसले मार्ला बाजी ?
शुक्रवार एकैपटक तीन फिल्म हल छिरेका छन् । फ्राईडे रिलिज अन्तर्गत प्रदर्शनमा आएका तीन फिल्म मध्ये ‘लम्फू’ ले मात्रै तामझाम र प्रचार प्रसार गरेको छ । अन्य दुई फिल्म छन् । ‘हिरोज’ र ‘मनाङ्गे नानी’ ले खासै प्रचार प्रसार गरेको देखिएको छैन । यसअघि नै सार्वजनिक गीत संगीत तथा ट्रेलरका कारण अन्य दुई फिल्मको तुलनामा ‘लम्फू’ लाई दर्शक प्रतिक्षित फिल्मका रुपमा हेरिएको छ । फेरि युवा स्टारर सलोन बस्नेत तथा तरकारीवालीको नामले चर्चित कुशुम श्रेष्ठका कारण पनि यो फिल्मको चर्चा अलिक बढी सुनिन्छ ।
नव–नायक कबिर खड्काले डेब्यु यो फिल्मले चलचित्र सेन्सर बोर्डबाट जुनसुकै वर्गका दर्शकले हेर्न पाउने ‘यूनिभर्सल सर्टिफिकेट’ पाउन सफल भएको छ । ‘यो फिल्ममा सलोन, कबिर तथा कुशुमका अलवा मरिश्का पोखरेल, सलोन बस्नेत, चाँदनी शर्मा, सञ्जित भण्डारी, कुशाग्र भट्टराई (बालकलाकार), आयन खड्का, ओम गुरुङ्ग, अजित लामिछाने, सन्तोष कार्की, कुशल गुरुंग, काजोल, रश्मी भट्ट, जानुका पौडेल, पुष्प आचार्य, झलक कार्की, थमन सिंह पुर्जा लगायतको अभिनय रहेको छ ।
समय र परिस्थितीले मानिसलाई कहिले सकारात्मक त कहिले नकारात्मक बनाउछ भन्ने देखाउन खोजिएको छ । गोपालचन्द्र लामिछाने निर्देशित यस फिल्मलाई शक्तिबल्दभ घोरासैनीले निर्माण गरेका हुन् ।
उता, बेरोजगारीको पीडा, महिला हिंसा, राजनैतिक विकृति, अन्याय विरुद्धको आवाज र प्रेमकथा बोकेर निर्माण भएको फिल्म ‘हिरोज’ द्वन्द्व निर्देशक एनबी महर्जनको निर्देशनमा निर्माण भएको हो । यो फिल्ममा करिश्मा मानन्धर, जयकिसन बस्नेत, पुर्णिमा लामा, मुकेश ढकाललगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । यो फिल्म अभिनेत्री पुर्णिमा लामाले निर्माण गरेकी हुन् ।
त्यस्तै, आजैदेखि प्रदर्शनमा आएको अर्को फिल्म हो ‘मनाङ्गे नानी’। खुस बहादुर गुरुङले निर्देशन गरेको ‘मनाङ्गे नानी’ मा भिम गुरुङ, शान्ती गुरुङ, कुशल गुरुङ, रिया गुरुङ, जेनिशा गुरुङ, खुसी गुरुङलगायतका कलाकारहरुको लिड अभिनय छ ।